यसरि हटाउन सकिन्छ अनुहारमा देखिने प्वाल - Himalayan Kangaroo
यसरि हटाउन सकिन्छ अनुहारमा देखिने प्वाल
Posted by Himalayan Kangaroo | २६ फाल्गुन २०७५, आईतवार ११:३५ |
एजेन्सी । अनुहारका ठूला रोम छिद्रलाई कम गर्नको लागि घरमै फेसप्याक तयार गर्न सकिन्छ । यसको लागि केराको बोक्रा, दही, टमाटरको रस, निमको पात, मुलतानी माटो, कागती आवश्यक हुन्छ । रोम छिद्रको लागि अमिलो कुराले छिटो हटाउन सकिने हुनाले अमिलो पदार्थ बढी प्रयोग गरिएको हो । यी पदार्थ संग अण्डाको सेतो भाग पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुलतानी माटो उपलब्ध नभएको खण्डमा बेसन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर रोमछिद्र हटाउनको लागि बेसनको तुलनामा मुलतानी माटोले छिटो र प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ ।
यी पदार्थको पेस्ट बनाउनको लागि सुरुमा केराको बोक्रालाई मिक्सरमा मिक्स गर्नुपर्छ । त्यसपछि केराको बोक्राको पेस्टमा दही, टमाटरको रस, निमको पात, कागती राखेर फेरी मिक्स गर्नुपर्छ । त्यो मिक्सलाई एउटा भाँडोमा खन्याएर त्यसमा मुलतानी माटो थप्नुपर्छ र त्यसलाई राम्रोसंग मिक्स गरेपछि पेस्ट तयार हुन्छ । उक्त पेस्टलाई अरु पेस्ट जसरि नै अनुहारमा लगाउन सकिन्छ । यो पेस्ट लगाएपछि १० देखि १५ मिनेट सम्म राख्नुपर्छ ।
यो पेस्ट लगाइसकेपछि धुँदा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । धुँदा चिसो पानी वा बरफको प्रयोग गर्नुपर्छ । चिसोले गर्दा रोमछिद्रमा छिटो असर हुन्छ । यो पेस्ट हप्ताको दुई देखि तीन पटक वा हरेक दिन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुलतानी माटो मिक्स नगरी एकैपटक धेरै पेस्ट बनाएर फ्रिजमा राख्नाले आफूले चाहेको समयमा त्यसमा मुलतानी माटो राखेर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
Previousअष्ट्रेलियामा लागु हुन लागेको १० वर्षे अभिभावक भिसाको लागि यस्तो छ प्रक्रिया
Nextयसरि बनाउन सकिन्छ खाँदेको स्वादिष्ट मुलाको अचार ( भिडियो )
अनलाइन सपिङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ ? यस्तै होला है !
७ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०३:५४
अलमलियो राहदानी विधेयक
३ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०३:३६
मोडल क्षितिजाले हद नाघिन
६ असार २०७२, आईतवार ०१:१८
कश्मीर भिडन्तमा नेपालीमुलका भारतीय सेना सन्दीप थापाको मृत्यु
युवा नेतृ रञ्जन दर्शनाको मनको कुरा : नजिकबाट महसुस गर्न चाहन्छु
सिंगापुरमा बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवी
यसरी छोड्न सकिन्छ चुरोटको कुलत
धर्म प्रचार गर्न खोज्ने चार जना पक्राउ